Wararka Xanta Suuqa Kala Iibsiga Ee Maanta , Lingard, Ozil, Kepa, Vazquez, Romero, Fabinho
HomeHoryaalada KaleWararka Xanta Suuqa kala iibsiga ee Maanta , Lingard, Ozil, Kepa, Vazquez, Romero, Fabinho
December 8, 2020 Horyaalada Kale, Horyaalka France, Horyaalka Germalka, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha 0
Ciyaaro.com waxay idin soo gudbineysaa Wararka Xanta suuqa kala iibsiga maanta oo Talaado ah waxaa kaloo idin soo socda Qeybaha Suuqa ee Koox walbo iyo waxyaabaha laga qoray.
Wakiillada Jesse Lingard ayaa raadinaya dookhyo amaah ah oo ay ku doonayaan ciyaaryahanka khadka dhexe ee Manchester United iyo England bisha Janaayo, iyadoo Real Sociedad ay ka mid tahay kooxaha ay wadahadallada ugu horreeya la yeesheen ee ku saabsan 27-jirkan. (Sky Sports)
Arsenal ayaa iska direysa xidiga reer Germany ciyaaryahanka khadka dhexe Mesut Ozil, 32, boqolkiiba “90%” gaar ah inuu ku biiro Fenerbahce bisha soo socota, sida laga soo xigtay mid ka mid ah xubnaha shirweynaha kooxda Turkiga ee. (Sport Digitale, via Mirror)
Tababaraha Chelsea Frank Lampard ayaa sheegay inuusan cadaadis saareynin inuu iibiyo goalkeeper 71m goolhayaha reer Spain Kepa Arrizabalaga,. (Evening Standard)
Manchester United ayaa u weecan doonta daafaca garabka uga ciyaara Real Madrid ee reer Spain Lucas Vazquez, oo 29 jir ah, iyagoo doonaya inay tartan la galaan ciyaaryahanka reer England Aaron Wan-Bissaka. (Defensa Central – in Spanish)
Tababaraha West Brom Slaven Bilic mustaqbalkiisa kooxda shaki ayaa ku jira ka dib markii uu lix dhibcood ka helay 11kii kulan ee furitaanka xilli ciyaareedka Premier League. (Mirror)
Manchester United ayaa isha ku heysa inay u ogolaato goolhayaha reer Argentina Sergio Romero inuu baxo bisha soo socota, wayna iska iibin doonaan hadii ay bixiso 2m oo ay ku dooneyso, inkastoo heshiis amaah ah oo 33 jirkaan ah ay sidoo kale dhici karto. (Kubadda Cagta)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Chelsea iyo Scotland Billy Gilmour, oo 19 jir ah, ayaa sheegay inuusan garanaynin “waxa mustaqbalku ku sii jiri doono” kooxda ka dib markii uu ka soo laabtay dhaawac iyo saxiixyada cusub ee ay Blues sameysay. (star)
Weeraryahanka reer Brazil Hulk, 34, ayaa ka tagay Shanghai SIPG waxaana lala xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo Premier League si bilaash ah. (the sun)
Tottenham iyo Arsenal ayaa lala xiriirinayaa ciyaaryahanka khadka dhexe ee AC Milan iyo xulka Ivory Coast Franck Kessie, oo 23 jir ah, kaasoo lagu qiimeeyo aduun dhan m 45m, qandaraaskiisana uu dhacayo June 2022. (Calciomercato – in Italian)
Liverpool ayaa rajeyneysa inay wadahadal la bilowdo ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Brazil Fabinho, oo 27 jir ah, kaasoo ku saabsan heshiis cusub. (Guardian)
Xiddiga reer Holland Jetro Willems ayaa diiday dalab qandaraas cusub oo uu kula joogayo Eintracht Frankfurt, isagoo fursad u siinaya Newcastle inay la soo saxiixato 26 jirkaan garabka bidix ka ciyaara, kaasoo amaah kula soo qaatay kooxda Magpies xilli ciyaareedkii hore. (Chronicle)
Daafaca bidix ee reer Morocco Achraf Lazaar, 28 jir, ayaa laga yaabaa inuu ka tago Newcastle bisha Janaayo marka uu furmo suuqa kala iibsiga, iyadoo qandaraaska ciyaaryahanka uu dhacayo xagaaga. (Passione Inter, iyada oo loo marayo Chronicle)
Newcastle ayaa dooneysa inay ku laabato saldhigooda Benton Talaadada iyagoo doonaya inay dib u bilaabaan tababarka ka dib qalalaasihii Covid-19 ee usbuucii hore ee sababay dib u dhigista kulankooda Aston Villa. Magpies ayaa rajeynaya in kulanka ay la ciyaarayaan West Brom inuu u dhici doono sidii loogu talagalay isbuucaan. (Taariikh)